Nagu saabsan - Sichuan Zhengcheng Starlight Energy Saving Technology Co., Ltd.
Sichuan Zhengcheng Starlight Energy Saving Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay bishii Nofeembar 2013. Waa soo saare xirfadle ah calaamadaha gudaha iyo dibedda iyo calaamadaha lagu qoro dukaamada ku habboon silsiladaha, dukaamada waaweyn, farmasiyada silsiladda ah, silsiladaha cuntada lagu cuno ee degdegga ah, bangiyada, xarumaha shidaalka, iwm. Shiinaha. Waxaa naga go'an inaan siino calaamado iyo alaabooyin tayo sare leh macaamiisha adduunka oo idil. Maanta, waxaan noqonnay mid ka mid ah kuwa ugu horreeya soo saarayaasha waxsoosaarka boodhadhka warshadaha silsiladda Shiinaha.
Zhengcheng Starlight Energy-saving Technology Co., Ltd. waxaa ka go'an cilmi baarista iyo horumarinta iyo soo saarida sanaadiiqda iftiinka ee keydinta tamarta, oo si gaar ah loogu talagalay bakhaarrada raaxada, farmasiyada, dukaamada waaweyn, bangiyada, saldhigyada gaaska, maqaayadaha iyo dukaamada kale ee silsiladaha lagu soo saaro. iyo sanduuqyada nalka lagu keydiyo ee tamarta badbaadiya oo tayo sare leh. Toddobadii sano ee la soo dhaafay, waxaan helnay afar shati qaran oo duurka ku ah sanduuqyada fudud ee bakhaarrada lagu iibiyo, waxaanna adeegyo xirfadeed u fidinnay in ka badan 100 magac oo Shiinaha ah. Ganacsadeyaasheena xirfadlayaasha ah waxay si taxaddar leh u doortaan qalabka samaynta alaabooyinka, nashqadeeyayaasha xirfadleyda ah ee laguu calaamadeeyay calaamadaha loogu talagalay adiga, kormeerka adag ee kormeerka tayada wax soo saarka kooxda, iyo farsamoyaqaanno khibrad leh ayaa kugu hagaya inaad isticmaasho alaabooyinka iyo dayactirka iibka kadib.
Intaas waxaa sii dheer, waxaan samaynay warshad xirfad leh, wadashaqeynta naga dhaxeysana waxay badbaadin doontaa gudiga dhex dhexaadiyaha oo wey keydin doontaa qiimahaaga. Wadashaqeennu waa xaalad guul-guul ah.
Waxaa naga go'an inaan macaamiisha u fidino adeegyo xirfad leh oo aan si firfircoon uga jawaabno shakigooda; waxaan fiiro gaar ah u leenahay shaqada adag ee xubin kasta, si qof kasta oo shaqaale ah uu u yeesho dareen lahaansho: waxaan diiradda saareynaa hal-abuurka wax soo saarka, oo waxaan si joogto ah u daba joognaa tayada wax soo saarka, kaliya inaan ku siino alaabada ugu fiican; Waxaan u hoggaansameynaa mabda'a daacadnimada ee wadashaqeynteenna, iskaashigeennu wuxuu noqon doonaa natiijo guuleysi-guul leh.
Zhengcheng ha u tago adduunka, adduunka ha ogaado Zhengcheng.
Wadajirka ku saleysan daacadnimada, guuleysiga guusha.
Ku guuleysta ixtiraamka macaamiisha leh aqoon xirfadeed iyo dabeecad shaqo oo dhab ah
Waa waajib saaran shirkad kasta inay qaado mas'uuliyadda bulshada. Toddobadii sano ee la soo dhaafay, Zhengcheng wuxuu had iyo jeer u hoggaansamayaa falsafada ay dadku ku wajahan yihiin iyo ilaalinta deegaanka.
Shaqaale kasta ha yeesho dareen lahaansho iyo waxqabad
Shaqada adag ee xubin kasta oo ka tirsan qoyska Zhengcheng waxay gacan ka geysatay guulaha cajiibka ah ee Zhengcheng maanta. Xubnaha qoysku way is ixtiraamaan, wax is bartaan, isbarbartaan, horumar wada sameeyaan, markastana tamar cusub ku duraan Zhengcheng. Waa jawi iswaafajin ah oo aan ku siin karno macaamiisha wax soo saar tayo sare leh iyo adeegyo aad u wanaagsan, isla markaana aan Zhengcheng uga dhigno mid aad u sii barwaaqo badan.
Shirkadeena waxay marwalba rajeyneysaa in wax soo saarkeenu wax ku biirin karo deegaanka. Waxaan isticmaalnaa tuubooyin shati si loo sameeyo sanduuqyo fudud si loo keydiyo korontada. Intaa waxaa dheer, waxaan kaliya u isticmaalnaa acrylic si aan u sameyno sanduuqyada fudud. Waxyaabaha qashinka ah ee loo yaqaan 'Acrylic waste' waa dib loo isticmaali karaa dibna loo isticmaali karaa. Macaamiil badan ayaa doorta badeecadeena, taas oo sidoo kale ka tarjumeysa kororka wacyiga bulshada ee ilaalinta tamarta.
Calaamadaha Xayeysiinta, Saxeex Farmashiyaha, Vacuum U samaynta Sanduuqa Nalalka Nalalka, Calaamadaha Iftiiminaya, Saxiixa Boodhka Nalalka Nalalka ah, Bannaanka Laydhka Bannaanka Saxeexa,